ခင်မင်းဇော်: ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အမှတ် (နှစ်)
“ကျမကလည်း ဘာဝမ်းနည်းစရာ ရှိလို့လဲ ဒါလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ် တွက်ပြီးသားပါလို့ ပြန်ပြောပစ်လိုက်တယ်။”
မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်...မခင်မင်းဇော်။ ဒါလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ တွက်ပြီးသားပါ....တဲ့။ တချို့တွေ နားလည်ရ ခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဘ၀ဒိုင်ယာရီကို မျှော်လိုက်ရတာ။ သိပ်ဖတ်ကောင်းတာ။ ဆက်ရေးနော်။ စောင့်ဖတ်မယ်။
မျှော်နေတာကြာပြီ...အခုမှပဲ ဖတ်ရတယ်။ အထွေအထူးတင်စရာမရှိရင် ခပ်စိပ်စိပ်လေး တင်ပေးပါအစ်မရေ....နောက် အချိန်၊နေရာ၊ဒေသ တွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်အကြမ်းဖျင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြပေးပါ...ကျွန်တော်က မှတ်တမ်းအတိအကျ ဖြစ်စေချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ....ညိုထက်ညို
ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေလာဖတ်သွားတယ် အမ။ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်။ လူကထောင်ကျနေပေမဲ့စိတ်တွေကို ထောင်မချထားဘဲ သူ့နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဘူးတယ် အမရေ။
အမ .. ဒါကို စောင့်ဖတ်နေရတာ ရက်ပေါင်းများစွာ ..း)
ဒါပဲလား...ခေတ်ဟောင်းတေးတွေ ပြန်သီပြီး တသက်လုံး ဂါရဝအပြုခံချင်နေတာလား... အခုကော ဘာတွေလုပ်နေလဲ ..ဒါကိုရေးတာ ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်...နှောင်းခေတ်တေးပဒေသာ အခန်းလုပ်နေတာလား...ငါတို့ ကတော့ စစ်တပ် မကောင်းမှန်းသိပေမယ့် ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကိုမှလဲ မယုံဘူး...ယုံကြည်စရာလဲ မတွေ့ဘူး..ယုံကြည်အားကိုးရလောက်အောင်လဲ ဘာတွေလုပ်ပြကြလို့လဲ ..တဆိတ်ရှိ ပြည်သူတွေကိုပဲ မြှောက်ပေး...ဟားဟား...ဘာပဲပြောပြော..ဂါရဝ အပြုခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်...ဂါရဝ ပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ...ဟားဟားဟား...
အစ်မ အပင်မြင့်လေ လေတိုက်ခံရလေဆိုတော့
ဟိဟိ..ဘာပင်ကြီးလဲ ဟင်..မြင့်နေတာက..ဘေစကိုင်းပင်ကြီးလား...ထင်းဆိုက်လို့လဲ မရ. အိမ်ဆောက်လို့လဲ မရ...အညွန့်လေးတွေတော့ တချို့ ကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေ က တို့စရာလုပ်စားတယ်ကြားဖူးတယ်... ဟဲဟဲ ..အညွန့်လေးတွေ တောင်လူတိုင်းမစားတဲ့ ဘောစကိုင်းပင်ကြီးဆိုရင်တော့....ဘယ်က ဘယ်လိုမြင့်တယ်ဆိုတာလေး သိခွင့်ရှိရင် သိချင်ပါတယ်ခင်ညာ.....
အန်တီရေ ဘ၀ဒိုင်ယာရီကို သေချာလာဖတ်ရှုသွားပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာ ဘ၀အတွက် အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေပါပဲ။
ဆက်ရေးပါဦးနော်… အမရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါတယ်။
>>aung + ohn...don't blame her !
Do self-examination first !
Wat have you done for your family and our mother land ???
-just think yourself first !!!